dopamine သည်နျူးကလီးယပ်စ် accumbens သည်အမ်ဖီတမင်းသွေးဆောင်မှုကြောင့် monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်များတွင်လူမှုနှောင်ကြိုးချို့ယွင်းမှုကိုဖျန်ဖြေပေးသည် - Your Brain On Porn
နျူကလိယ dopamine တစ် monogamous ကြွက်မျိုးစိတ် (2010) တွင်လူမှုရေးစဘွန်း၏စိတ်ကြွဆေးသွေးဆောင်ချို့ယွင်း mediates accumbens
နျူကလိယ dopamine တစ် monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်လူမှုရေးစဘွန်း၏စိတ်ကြွဆေးသွေးဆောင်ချို့ယွင်း mediates accumbens
proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေဇန်နဝါရီ 19, 2010; 107 (3): 1217-1222 ။
အွန်လိုင်းဒီဇင်ဘာ 29, 2009 ထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1073 / pnas.0911998107
yan လျူ,a,b Brandon ဂျေ Aragona,c Kimberly အေလူငယ်,a,b ဒါဝိဒ်သည်အမ် Dietz,b,d,e မိုဟာမက် Kabbaj,b,d Michelle Mazei-Robison,e အဲရစ်ဂျေ Nestler,e နှင့် Zuoxin ဝမ်a,b,1
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (Microtus ochrogaster), မိတ်လိုက်ပြီးနောက်ဗဟို dopamine (DA) ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည့်အတွက်အပြုအမူတစ်စုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောတဲ့လူမှုရေးအရ monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ pair တစုံဘွန်းနှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြော circuitry အပေါ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးစမ်းသပ်မှုများတွင်စိတ်ကြွဆေး (AMPH) လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတစ်ခု conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) ပါရာဒိုင်းနှင့် D1 ကဲ့သို့ DA receptors ၏ activation ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းကိုပြသခဲ့သည်ကို အသုံးပြု. လေ့လာခဲ့သည်။ Next ကိုကျနော်တို့ pair တစုံဘွန်းအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲ AMPH ထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ CPP ကသွေးဆောင်ထိရောက်သောအဆိုပါဆေးများမှာ AMPH နှင့်အတူ pretreated ယောက်ျားမိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေးပြသရန်ပျက်ကွက်သော်လည်းနဂိုအတိုင်းနှင့်ဆား pretreated ထိန်းချုပ်မှုအထီး, မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေးပြသ။ ထိုသို့သောလည်း D1 တိုးမြှင် AMPH ကုသမှုပေမယ့်နျူကလိယ accumbens ထဲမှာမ D2, DA အဲဒီ receptor စကားရပ် (NACC) ။ ထို့ပြင် NACC အတွက် D1 ကဲ့သို့ DA receptors ၏ pharmacological ပိတ်ဆို့ AMPH-ကုသယောက်ျားအတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေးကယ်လွှတ်တော်မူ၏။ အတူတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာထပ်ခါတလဲလဲ AMPH ထိတွေ့ pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၏ချွတ်ယွင်းမှု, အ NACC အတွက် DA အဲဒီ receptor-တိကျတဲ့ယန္တရားကနေတဆင့်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏အမူအကျင့် repertoire ကျဉ်းမြောင်းစေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။
keywords: vole, ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ, D1 receptor
ဒါဟာကျယ်ပြန့်ကြံ့ခိုင်ရေးမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေဟာ mesolimbic dopamine (DA) စနစ် (အပါအဝင်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည်လက်ခံသည်1, 2) ။ ဒီစနစ်မကြာခဏ (အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသော်လည်း3, 4), ဒါကြောင့်လည်း (ထိုကဲ့သို့သောမိဘနှင့်သားစဉ်မြေးဆက်တို့အကြား Juvenile နှင့်လူမှုရေး Bond အကြားလူမှုရေးပြဇာတ်ကဲ့သို့သောအခြားသဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီး5-9) ။ မကြာခဏသုတေသနအတွက် underrepresented အရွယ်ရောက်ပြီးသူအိမ်ထောင်ဖက်, ဆိုလိုသည်မှာ, pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အကြားဖွဲ့စည်းထားသောလူမှုရေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးလူမှုရေးအရ monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်ကို အသုံးပြု. မကြာမီကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (Microtus ochrogaster()10-12), အအာရုံကြောစည်းမျဉ်းအခြေခံ pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွင်းဖြစ်ပေါ် (NACC) (၏အလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်ညွှန်ပြ13-15လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေကိုဖြန်ဖြေဘို့အရေးပါ) -a mesolimbic ဦးနှောက်ဒေသ (1, 2, 16).
စိတ်ခွန်အားနိုး circuitry ထိုကဲ့သို့သောနို့တိုက်ကျွေးရေး, မိတ်လိုက်, နှင့်လူမှုရေး Bond အဖြစ်အပြုအမူတိုးမြှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးမြှင့်တင်ရန်ပြောင်းလဲပေမယ့် (1, 17), ဒါကြောင့် (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်အတုလုအားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်8) ။ ထိုကဲ့သို့သောကင်းနဲ့စိတ်ကြွဆေးအဖြစ်အလွဲသုံးစားမှု psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများ, (AMPH), mesolimbic DA လှုပ်ရှားမှုမြဲပွောငျးလဲအတွက်ရလဒ်တွေကို (၏ဥပမာအားဖြင့်, အုပ်ချုပ်ရေး18, 19) ။ ဤအများနှင့်အခြားစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဒီ circuit ကိုအပေါ်ပြင်းထန်သောထိခိုက်မှုသဘာဝကမက်လုံးပေး (များ၏ရိပ်မိတန်ဖိုးကိုလျော့ချဖို့အကြံပြုထားသည်20), လူမှုရေးသဘောသဘာဝမြားအပါအဝငျ (8) ။ ဒါကြောင့်မူးယစ်ဆေးစွဲချို့ယွင်းလူမှုရေးအပြုအမူကိုပြသကြောင်းလူသိများသည်ဖြစ်သော်လည်း (21), မူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံနှင့်လူမှုရေးပူးတွဲမှုများအကြားအပြန်အလှန်များ၏အာရုံကြောစည်းမျဉ်းညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းအတွက်, ထိုကဲ့သို့သော interaction ကအရွယ်ရောက်ပြီးသူ conspecifics အကြားလူမှုရေး Bond ပြမရိုးရာဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များတွင်ပုံစံရန်ခက်ခဲဖြစ်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောလူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ neurobiology, အထူးသလူကြီးများအကြား Bond တွဲ, ကျယ်ပြန့် (မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်ကိုလေ့လာခဲ့ပြီး10-12), နှင့်မကြာသေးမီက, ဒီမျိုးစိတ် (AMPH များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးဆနျးစစျဖို့အလားအလာမော်ဒယ်အဖြစ်စတင်ထူထောင်ခဲ့ပြီး22) ။ ထိုမှတပါး, pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးနှင့် AMPH အားဖြည့်နှစ်ဦးစလုံး (အနည်းဆုံးတော့တစ်စိတ်တစ်ဒေသထဲမှာ, NACC အတွင်း DA ဂီယာအသုံးပြုပုံကမကထပြုခဲ့ကြသည်14, 15, 23) ။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုလူမှုရေးစဘွန်းအပေါ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာမယ့်အမူအကျင့် assay တည်ထောင်ရန်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်အသုံးပြုသောနှင့်ဤအပြုအမူသက်ရောက်မှုအခြေခံတဲ့အာရုံကြောယန္တရားထုတ်ဖေါ်ဖို့ NACC DA အချက်ပြစနစ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
AMPH-သွေးဆောင် conditional ရာဌာန preferences (CPP က) တစ်ဦး receptor-Specific ထုံးစံ၌ DA ကကမကထပြုခဲ့သည်။
တစ်ဦးချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် pretest မှဆွေမျိုး AMPH အေးစက်၏3ရက်, ပြီးနောက်, posttest စဉ်အတွင်း AMPH-တွဲလှောင်အိမ်ထဲမှာကုန်ကာလ၌သိသိသာသာတိုးများကသတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ AMPH ၏နှစ်ခုနိမ့်ဆုံးဆေးများ်ကိုမဆားထိုးမဟုတ်သလိုဆား (0.1 နှင့် 0.5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ကိုစမ်းသပ်ပြောင်းလဲလှောင်အိမ်ဦးစားပေး (သဖန်းသီး။ 1A) ။ သို့သော်ယောက်ျား (1.0 အပါအဝင် AMPH မြင့်မားဆေးများနှင့်အတူအေးစက်t = 2.87, P <0.01), 3.0 (t = 3.63, P <0.01), ဒါမှမဟုတ် 5.0 mg / kg (t = 3.03, P <0.01), CPP (ပြသသဖန်းသီး။ 1A).
(A) အေးစက်၏ 0.1 ရက်ပေါင်းကာလအတွင်းဆားသို့မဟုတ် AMPH (0.5 သို့မဟုတ်3mg / kg) ၏အနိမ့်အညွှန်းများကို ip ထိုးခံသောအထီး CPP ကမပြခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်ပိုမိုမြင့်မားဆေးများ (1.0, 3.0 နှင့် 5.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) မှာ AMPH နှင့်အတူအေးစက်အထီးသိသိသာသာပိုပြီးအချိန်ကုန် ...
AMPH သိသိသာသာမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် DA neurotransmission တိုးပွါးသောကြောင့် (24), နှင့် DA သည်အခြားမျိုးစိတ်အတွက် AMPH အားဖြည့် mediates (23), ကျနော်တို့လာမယ့်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ DA အဲဒီ receptor (Dar) စည်းမျဉ်းဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များ AMPH မတိုင်မီဆားသို့မဟုတ်ဆားပု nonselective Dar ရန်၏ကွဲပြားခြားနားသောဆေးများ် (haloperidol) ဖြစ်စေနဲ့ကုသ, အ CPP ကပါရာဒိုင်းအတွက် pretested ခဲ့ကြသည်အေးစက်၏ 1.0 ရက်အတွင်းထိုး (3 / ကီလိုဂရမ် mg), ပြီးတော့တစ်ဦး posttest အတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဆားနဲ့ကုသဘာသာရပ်များ (t = 2.69, P <0.01) သို့မဟုတ် haloperidol (0.1 mg / kg) ၏နိမ့်ဆုံးဆေးများပါဝင်သောဆား; t = 3.62, P <0.01; 1.0 mg / kg; t = 3.89, P <0.01) AMPH အေးစက်မတိုင်မီ 5.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်မှာ haloperidol AMPH ၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုများတွင် DARs ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုဖေါ်ပြခြင်း, AMPH- သွေးဆောင် CPP ပြသသော်လည်း AMPH- သွေးဆောင် CPP ပြသသဖန်းသီး။ 1B) ။ Dar မျိုးကွဲ AMPH-သွေးဆောင် CPP က mediates ရာဆုံးဖြတ်ရန်ကျနော်တို့လာမယ့်အေးစက်နေစဉ်အတွင်း AMPH ထိုးမီတ D1 ကဲ့သို့သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရန် (SCH23390) သို့မဟုတ်တစ် D2 ကဲ့သို့သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရန် (eticlopride) ဖြစ်စေအုပ်ချုပ်။ D2 ကဲ့သို့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း (AMPH-သွေးဆောင် CPP ကပိတ်ဆို့မပြုခဲ့t = 3.15, P <0.01 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်များအတွက် 0.5 t = 2.60, P <0.05 5.0 mg / kg eticlopride အတွက်) အတွက် 1 သို့သော် DXNUMX ကဲ့သို့သော receptors များအားပိတ်ဆို့ခြင်းသည် AMPH- သွေးဆောင် CPP ကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။သဖန်းသီး။ 1B), AMPH-သွေးဆောင် CPP ကအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် D1 ကဲ့သို့, ဒါပေမယ့် D2 ကဲ့သို့မဟုတ် receptors ၏ activation ကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းဆန္ဒပြ။
AMPH အတွေ့အကြုံအိမ်ထောင်ဖက်-သွေးဆောင် Partner ဦးစားပေးမှုဖွဲ့စည်းခြင်းပွောငျးလဲ။
AMPH-သွေးဆောင် CPP က D1 ကဲ့သို့ receptors (၏ activation လိုအပ်ပေမယ့်သဖန်းသီး။ 1B), ကျနော်တို့ယခင်က D1 ကဲ့သို့ receptors ၏ activation (မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးကာကွယ်ပြခဲ့ကြ14) ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ AMPH pretreatment အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် pair တစုံဘွန်းနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မယ်လို့တွေးဆ။ အထီးအဘယ်သူမျှမထိုး (နဂိုအတိုင်း), ဆားဆေးထိုး, ဒါမှမဟုတ် 1.0 နေ့ရက်ကာလအဘို့ 5.0 သို့မဟုတ်3မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် AMPH ၏ထိုး (CPP ကသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်သောတစ်ဦးဆေးထိုးပါရာဒိုင်း) ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းလေးအုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ စတုတ္ထနေ့ရက်တွင်, ရှိသမျှယောက်ျား 24 ဇများအတွက်လိင်လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲခဲ့ကြပြီးတော့ဖက်ဦးစားပေးဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်း (14, 25-27), မိတ်လိုက်အဖော်ရှာ-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး (နဂိုအတိုင်းအထီးပြသမတိုင်မီ3နေ့ရက်ကာလအဘို့ဆားဆေးထိုးခံသောနဂိုအတိုင်းအထီးနှင့်ယောက်ျားပေါင်း; t = 3.05, P <0.01, ဆားထိုးသွင်းအထီး; t = 3.21, P <0.01; သဖန်းသီး။ 2A) ။ သို့သော်မိတ်လိုက်မတိုင်မီ3နေ့ရက်ကာလအဘို့ AMPH ၏ထိုးဖြစ်စေနှင့်အတူ pretreated ခဲ့အထီးဖက်ဦးစားပေးပြသရန်ပျက်ကွက် (သဖန်းသီး။ 2A) ။ အရေးကြီးတာက, AMPH pretreatment (ထိုတွဲပြီးကာလအတွင်းအကြိမ်ရေအဖော်ရှာမထိခိုက်ခဲ့ပါF(3, 26) = 0.26, P = 0.85; သဖန်းသီး။ 2B) သို့မဟုတ် locomotor လှုပ်ရှားမှုဟာမိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း (F(3, 26)= 2.34, P = 0.10; သဖန်းသီး။ 2C), AMPH တိုက်ရိုက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေးနှင့်အတူဝငျရောကျစှကျကြောင်းညွှန်ပြ။
(A) မိတ်လိုက်၏ 24 ဇပြီးနောက်နဂိုအတိုင်းယောက်ျားတစ်ဦးထူးဆန်းတဲ့အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူ side-by-side အဆက်အသွယ်သိသိသာသာပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းခြင်းဖြင့်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးပြသ။ ဤသည်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုလည်းခံသောယောက်ျားတို့ကပြသခဲ့ပါတယ် ...
AMPH အတွေ့အကြုံဟာ NACC အတွက် D1 receptor Elevates ။
AMPH preexposure ဖက်ဦးစားပေးများနှင့်နှစ်ဦးစလုံး AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (အထကျကိုကြည့်ပါ) နဲ့ pair တစုံဘွန်း (အာရုံချို့ယွင်းကြောင်းပေးထား14) NACC DA နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည်ကျနော်တို့ AMPH သိသိသာသာအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် mesolimbic DA circuitry ပြောင်းလဲပစ်မယ်လို့တွေးဆ။ အထက်ဖော်ပြပါအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုကနေဘာသာရပ်များ၏ဦးနှောက် DA အမှတ်အသား mRNAs ၏ situ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်။ ; AMPH (1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) D1 အဲဒီ receptor အတွက်သိသိသာသာတိုးပြသခဲ့သည် (D1R နဲ့ကုသယောက်ျား t = 3.06, P <0.01), ဒါပေမယ့်မဟုတ် D2 အဲဒီ receptor (D2R), NAcc အတွင်း mRNA တံဆိပ်ကပ်, ဆားကြိုတင်ကုသမှုကိုလက်ခံရရှိအထီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ (သဖန်းသီး။3A-C) ။ NAcr သို့အဓိက dopaminergic ထည့်သွင်းပေးသည့် ဦး နှောက်ဒေသ - ventral tegmental (ရိယာ (VTA) အတွင်းရှိ tyrosine hydroxylase (TH), DA transporter (DAT), ဒါမှမဟုတ် D2Rs အတွက် mRNA တံဆိပ်ကပ်မှုသိပ်သည်းဆမှာအုပ်စုကွဲခြင်းမရှိဘူး။သဖန်းသီး။3D-G) ။ အဆိုပါ NACC အတွက် D1Rs ၏တိုးမြှင့်စကားရပ်ကိုထပ်မံ blotting အနောက်တိုင်း (ကအတည်ပြုခဲ့သည်t = 1.90, P <0.05; သဖန်းသီး။3H နှင့် I) ။ အတူတူအဲဒီဒေတာ AMPH ထိတွေ့အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာအဆိုပါ NACC အတွက် D1Rs ၏အဆငျ့ voles-တိုးပွားလာ၏ mesolimbic DA system ပေါ်တွင် receptor- နှင့် site-specific ကိုသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။
D1R ၏ situ တံဆိပ်ကပ်ထဲမှာဖေါ်ပြခြင်းဓာတ်ပုံပုံရိပ်များ (A) နှင့် D2R (B) ကို NACC အတွက် mRNA နှင့် 1.0 နေ့ရက်ကာလအဘို့ဆားသို့မဟုတ် AMPH (3 mg / kg) ၏ ip ထိုးခံသောသားယောက်ျားကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ putamen (က CP) caudate ။ AMPH ကုသမှုသိသိသာသာ၏သိပ်သည်းဆတိုးမြှင့် ...
Partner Preferences ကို၏ NACC ဖျန်ဖြေ AMPH ချို့ယွင်းအတွက် D1 receptor ။
ကျနော်တို့အရင်က (အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ထဲမှာ, NACC အတွင်း D1Rs ၏ activation မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီး, ထိုပြခဲ့ကြ14), နှင့်လက်ရှိလေ့လာမှုကို (NACC အတွက် AMPH ထိတွေ့မှုဖွင့်-ထိန်းညှိ D1Rs ပြသဖန်းသီး။ 3) ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သမိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ AMPH-သွေးဆောင်ချို့ယွင်းသည့် NACC အတွင်း D1Rs ကကမကထပြုခဲ့သောအယူအဆစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အထီးကို (NACC shell ကိုမှာမြန်မာနိုင်ငံသရည်ရွယ် stereotaxic cannulation လက်ခံရရှိသဖန်းသီး။ 4A) ။ artificial cerebrospinal fluid (CSF) တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ် SCH1 အေးစက်၏ 23390 ရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်း AMPH ထိုး (1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ရှေ့တော်၌ထို NACC သို့ထိုးသွင်းခဲ့ D3 တူသောအဲဒီ receptor ရန်၏ကွဲပြားခြားနားသောဆေးများပါဝင်သော CSF ။ အဲဒီနောကျဘာသာရပ်များ 24 ဇများအတွက်အမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲပြီးတော့ဖက်ဦးစားပေးဘို့ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ (အထက်ပါစမ်းသပ်မှုနှင့်ဝသကဲ့သို့သဖန်းသီး။ 2), AMPH ထိတွေ့မှု (CSF သို့မဟုတ် SCH23390 တစ်ဦးအနိမ့်ထိုး၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NACC ထိုးခံသောယောက်ျားအတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေးတားဆီးသဖန်းသီး။ 4B) ။ သို့သော် SCH23390 (100 ng / ကီလိုဂရမ်) ၏မြင့်မားသောထိုးနှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့အထီး (ဖက်ဦးစားပေးပြသt = 2.55, P <0.05), NAcc အတွက် D1R ပိတ်ဆို့မှုမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ AMPH- သွေးဆောင်ချို့ယွင်းဖယ်ရှားပစ်ကြောင်းညွှန်ပြသဖန်းသီး။ 4B) ။ အုပ်စုတစုကွဲပြားမှုဟာမိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းတွဲပြီးသို့မဟုတ် locomotor လှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းမိတ်လိုက်အကြိမ်ရေအတွက်ရှာမတွေ့ခဲ့ပါ။
(Aယောက်ျားမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ဦးနှောက်၏ NACC အတွက်ဆေးထိုး site ကိုသရုပ်ဖော်) တစ်ဦးကဓာတ်ပုံတစ်ပုံပုံရိပ်နှင့်သိထားပုံဆွဲ။ ဒီသတ်သတ်မှတ်မှတ်မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းမိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး mediates ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ NACC shell ကိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ (Bအချင်းချင်းအပြန်အလှန် NACC လက်ခံရရှိကြောင်း) အထီး ...
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ AMPH ထိတွေ့မှု (အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ induces သောငါတို့ယခင်တွေ့ရှိချက်ပုံတူပွား22) နှင့်ယင်း NACC အတွက် D1R activation ဒီအပြုအမူများအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းသည်အခြားကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းရလဒ်သရုပ်ပြ (28) ။ မိတ်ဖက်-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ (ဖက်ဦးစားပေး) D1R အားဖြင့် facilitated ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း AMPH-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ (CPP က), D2R ကကမကထပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်: ဒီတွေ့ရှိချက်အတူတကွအစောပိုင်းလေ့လာမှုများနှင့်တကွ, NACC အတွက်ကွဲပြား DAergic ယန္တရားများ AMPH- နှင့်မိတ်ဖက်-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေကိုထိန်းညှိကြောင်းအကြံပြု အဆိုပါ NACC အတွင်း D1R activation အားဖြင့် activation နှင့်ဘယျလိုမှမ (13-15) ။ [ဒါဟာ (D2R activation အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် CPP က mediates, အ NACC အတွက်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်29) နှင့် D1R activation ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးအနွယ်ဆီသို့ညွှန်ကြားသူတွေကိုကဲ့သို့သောအခြားလူမှုရေးအရ-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေ, (ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်7, 30)] ။
CPP က၏ differential DAergic စည်းမျဉ်းများနှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအရှိဆုံးဖွယ်ရှိကွဲပြားခြားနားသော Dar Subtype ကိုသက်ဝင်လှုံ့ဆော်မှု-evoked DA အာရုံစူးစိုက်မှု၏ဘွဲ့အတွက်ကွဲပြားမှုအားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ DA ပြင်းအားအတွက်ကျိုးနွံတိုးဦးစားမြင့်သောဆှဖှေဲ့ D1Rs (ကိုသက်ဝင်သော်လည်းကြောင့်စည်းနှောင်ဆှဖှေဲ့အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရန်, DA အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ခိုင်မာတဲ့မြင့်တက်, အနိမ့်ဆှဖှေဲ့ D2Rs ကိုသက်ဝင်ရန်လိုအပ်သည်31) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ခုနှစ်, AMPH (DA အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်အများကြီး သာ. ကွီးမွတျတိုး evokes24) (အဖော်ရှာခြင်းဖြင့် evoked ကြောင်းနှိုင်းယှဉ်15, 25) ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုလူမှုရေး interaction က (စဉ်အတွင်း DA အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်အတော်လေးကျိုးနွံတိုးအကြံပြု15, 25) မြင့်သောဆှဖှေဲ့ D2Rs ၏တိကျသော activation ခွင့်ပြုပါနှင့်, အရှင် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးလွယ်ကူချောမွေ့။ ပြောင်းပြန် AMPH အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ DA အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ခိုင်မာတဲ့တိုးအားဖြင့် AMPH-သွေးဆောင် CPP ကလွယ်ကူချောမွေ့, အနိမ့်ဆှဖှေဲ့ D1Rs ကိုသက်ဝင်ဖွယ်ရှိလုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
DA အားဖြင့် receptor-တိကျတဲ့အမူအကျင့်စည်းမျဉ်းမူးယစ်ဆေးနှင့်သဘာလှုံ့ဆော်မှုကို (NACC အတွင်းကွဲပြားအာရုံခံလူဦးရေအားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များတွင် extracellular electrophysiological လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်32) ။ ထိုကဲ့သို့သော electrophysiological လေ့လာမှုများတစ်ဦးချင်းစီတွင် neuron အပေါ်ထုတ်ဖော်ပြောဆို DA receptors ၏မျိုးကွဲခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း, ခန္ဓာဗေဒလေ့လာမှုများကို (NACC အနည်းငယ်သာ coexpression နှင့်အတူ D1Rs သို့မဟုတ် D2Rs ဖြစ်စေဖော်ပြနေသောစီမံကိန်းများတွင် neuron များ၏ဖွဲ့စည်းကြောင်းသရုပ်ပြ33) ။ Psychostimulants ဦးစား ((မော်လီကျူးများပြ၏တိုးလာ phosphorylation ကဆုံးဖြတ်ကဲ့သို့) D1Rs ကနေမြစ်အောက်ပိုင်း intracellular အချက်ပြလမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်34) နှင့်ကျွန်တော်ယခင်ကထိုအပြလမ်းကြောင်း၏ activation (မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးတိုးမြှင့်ကြောင်းပြသကြ35) ။ အဆိုပါ NACC အတွင်း DA ဂီယာ AMPH ဖို့တုံ့ပြန်မှုများနှင့်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းရေးအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍပေမယ့်ထို့ကြောင့်ဤအပြုအမူဖွယ်ရှိ (striatal projection စနစ်များပါဝင်ကြောင်းကွဲပြား microcircuitries မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ကြသည်33, 36) ။ pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးဦးစားသည့် ventral pallidum (မှပရောဂျက်တစ်ခုကို D2R-ဖော်ပြအာရုံခံ၏ activation ကကမကထပြုခဲ့သောကြောင့်ဤသည်အထူးသဖြင့်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်33pair တစုံဘွန်းများအတွက်အရေးကြီးသော), အခြားဦးနှောက်ဒေသ (26).
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ AMPH အတွေ့အကြုံကိုမိတ်လိုက်-သွေးဆောင် pair တစုံဘွန်းကာကွယ်သက်သေအထောက်အထားသည်။ ဤအစမ်းသပ်ချက်အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်မှုကနောက်ဆုံး AMPH ထိတွေ့မှု (ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါမူးယစ်ဆေးလုံးဝ metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်ခဲ့ပြီးနောက်) ပြီးနောက် 48 ဇဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည့်အတိုင်း, ထိုဒေတာများကိုလူမှုရေးစဘွန်းအပေါ် AMPH တစ် persistent အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သည်အခြားမျိုးစိတ်အတွက် AMPH ၏သက်ရောက်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်းတစ်ခုမှာအလားအလာယန္တရား, (37, 38), အရာအားဖြင့် AMPH pair တစုံ Bond ဟာ NACC အတွင်း D1R စကားရပ်၏တိုးအားဖွငျ့ဖွစျသညျအယှက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာအယူအဆ (မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် NACC D1Rs များ၏ရန်အခန်းကဏ္ဍကထောက်ခံနေသည်14, 24) နှင့် AMPH-ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NACC D1R ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကို၏ကယ်ဆယ်ရေးသရုပ်ပြလက်ရှိဒေတာများက (သဖန်းသီး။ 4) ။ စိတ်ဝင်စားစရာကျနော်တို့ယခင်ကတစ်စုံဘွန်း၏ 1 ရက်သတ္တပတ်ကဤအာရုံကြော plasticity သောအထီး voles အနေနဲ့အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာယန္တရားကြောင်းအကြံပြု, လိင်လက်ခံအမျိုးသမီးအပါအဝင် conspecific သူစိမ်း, ဆီသို့ရွေးချယ်ကျူးကျော်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်တက်-စည်းမျဉ်း NACC D2Rs ၏ပြီးနောက်, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ကြောင့်ပြသကြ (ပြီးသားထူထောင် pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ထိန်းသိမ်းရန်14) ။ လက်ရှိလေ့လာမှု AMPH သူတွေဟာ pair တစုံဘွန်း၏ AMPH-ချို့ယွင်းမှဦးဆောင်, ဒီ neuroplasticity ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒါဟာ AMPH-ကုသအထီး AMPH ဆုတ်ခွာတစ်ခုဆန္ဒရှိပြည်နယ်နှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးပေါင်းသင်းစေခြင်းငှါ, ဤသို့အနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့ pair တစုံဘွန်း၏ AMPH ချို့ယွင်းအခြေခံအံ့သောငှါလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးကယခင်လေ့လာမှုအထီးကြွက် (ထဲမှာဃ-စိတ်ကြွဆေးချို့ယွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုကအရှိန်မြင့်တက်လာထိုးအချိန်ဇယားကိုမှဆုတ်ခွာသရုပ်ပြ39) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာ, သို့သော်, ကွဲပြားခြားနားသောကုသမှုအုပ်စုများထံမှ voles (ဆင်တူမိတ်လိုက်အကြိမ်ကြိမ်ပြသသဖန်းသီး။ 2B), သူတို့စိတ်ကြွဆေးကနေဆုတ်ခွာတစ်ပြည်နယ်အတွက်ဖြစ်ကောင်းမဟုတ်ကြကြောင်းညွှန်ပြ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဒီဖြစ်နိုင်ခြေနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးအချက်ကိုခိုင်လုံမှု။
ဒါဟာကောင်းစွာ (မူးယစ်သွေးဆောင်အာရုံကြော plasticity မူးယစ်ဆေးစွဲဖို့အခြေခံကျကြောင်းတည်တတ်၏40) ။ Psychostimulants သိသိသာသာကို (mesolimbic DA စနစ်တည်ဆောက်ပုံ plasticity ပြောင်းလဲ41) နှင့်ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေပိုပြီးအာရုံခံ (ဖော်ပြ D1 အတွက်အမြဲတည်သောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုဖို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်37) ။ ထိုမှတပါး, electrophysiological လေ့လာမှုများ (ကိုကင်းအတွေ့အကြုံ NACC အတွင်းနောက်ဆက်တွဲ neuroplasticity လျှော့ချနိုင်သည်ကိုပြသကြ42) ။ အမှန်မှာထို NACC ၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အာရုံကြောပြန်လည်ဖွဲ့စည်း (ရှုပ်ထွေးသောပတ်ဝန်းကျင်မှာမှဝတ္ထုထိတွေ့ပြီးနောက်သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်အာရုံကြောပြန်လည်ဖွဲ့စည်း attenuates43) ။ ထို့ကြောင့်, မူးယစ်ဆေးစွဲကျယ်ပြန့်လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ် (တစ်ဦးရောဂါအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပေမယ့်1, 40, 44), က mesolimbic ဆားကစ်အတွက်အပိုဆောင်းအပြောင်းအလဲတချို့များအတွက်အလားအလာတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင်အရှုံးလည်းစွဲများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်မည်အကြောင်းမကြာခဏ underappreciated ဖြစ်ပါတယ်။ plasticity အတွက်ထိုသို့သောလျှော့ချရေးမူးယစ်ဆေးရှာမယ့်အမူအကျင့် repertoire ကန့်သတ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာ AMPH-ကုသ voles လျှော့ pair တစုံဘွန်းအပြုအမူသရုပ်ပြ သို့ဖြစ်. အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ pair တစုံဘွန်းအပေါ် AMPH ထိတွေ့မှု၏လက်ရှိသက်ရောက်မှုမိခင်အပြုအမူအပါအဝင်အခြားလူမှုရေးအပြုအမူတွေအပေါ် psychostimulants ၏ deleterious သက်ရောက်မှုသရုပ်ဖော်ယခင်လေ့လာမှုများ (နှင့်ကိုက်ညီများမှာ45-47) နှင့်လူမှုရေးပြဇာတ် (48-50) ။ အတူတူ, ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုဦးနှောက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ဘယ်လိုစာမေးပွဲသိသိသာသာ (လူသားများတွင်လူမှုရေးအပြုအမူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအကြားခိုင်မာတဲ့ interaction ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးချဲ့စေခြင်းငှါ, ဂတိတော်ပေးပါသည်21).
ဘာသာရပ်များလိင်တစ်ဦးဓာတ်ခွဲခန်းမွေးမြူရေးကိုလိုနီများထံမှနုံအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရပ်များ (21 × 12 × 28 စင်တီမီတာ) ရေနှင့်စားနပ်ရိက္ခာကြော်ငြာ libitum ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်ရှိရာအသက် 16 ရက်ပေါင်းမှာနို့နှင့်ပလပ်စတစ်အိတ်များအတွက်လိင်တူချင်းမှေးခငျြးအားလုံး၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးလှောင်အိမ်တစ်ခု 14 အောက်မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်: 10 အလင်း-မှောင်မိုက်သံသရာနှင့်အပူချိန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အားလုံးဘာသာရပ်များစမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအသက်အရွယ်လောက် 90 လက်ထက်၌။ Stereotaxic cannulation နှင့် DA မူးယစ်ဆေး site ကို-တိကျတဲ့ပြုတ်ရည် (တခြားနေရာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါပြီ14).
CPP ကစမ်းသပ်ခြင်း (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကောက်ယူခဲ့သည်22) ကိုအောက်ပါချွင်းချက်အတူ။ တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်ကနဦးလှောင်အိမ် preference ကိုတစ်ရက် 30 အပေါ်တစ်ဦး 1-မိ pretest ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာရပ်များထို့နောက် 40 ရက်ဆက်တိုက်များအတွက်ဦးစားပေးလှောင်အိမ် (နှစ်ဦးစလုံး AMPH နှင့်ဆားထိုးထိုနေ့ရက်တွင်ပေးခဲ့6ဇဆိတ်ကွယ်ရာ) (ရက်ပေါင်း 3-2) ဖို့ nonpreferred လှောင်အိမ်နှင့်ဆားမှ AMPH အတူ4မိအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းအေးစက်ခဲ့သည်။ အဲဒီနောကျဘာသာရပ်များနေ့က5အပေါ်တစ်ဦးချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ရှေ့မှောက်တွင်အဘို့ (posttest) စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။
မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်ခြင်း (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကောက်ယူခဲ့သည်14) ။ အတိုချုပ်ယင်းစမ်းသပ်ခြင်းယန္တရား (12 × 28 × 16 စင်တီမီတာ) နှစ်ခုအပြိုင်တူညီလှောင်အိမ်မှဆွန်းပြွန် (7.5 × 16 စင်တီမီတာ) ကဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဦးချင်းစီအိုးအိမ်တစ်လှုံ့ဆော်မှုတိရိစ္ဆာန်ဗဟိုလှောင်အိမ်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုတိရိစ္ဆာန်များအချင်းချင်းတိုက်ရိုက်ထိတွေ့စရာမလိုဘဲမိမိတို့၏သီးခြားအိတ်များအတွင်းထိထိရောက်ရောက်မလံကြိုးပါသောအကျွမ်းတဝင် "လက်တွဲဖော်" (ဘာသာရပ်၏အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဖက်) နှင့်တစ်ဦးကျွမ်းတဝင်မရှိသော "လူစိမ်း" (ယခင်ကဘာသာရပ်ကြုံတွေ့ဘူးသောအမျိုးသမီး) တို့ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ 3-ဇစမ်းသပ်မှုများစတင်မှာဘာသာရပ်များဗဟိုလှောင်အိမ်သို့ထားရှိနှင့်ယန္တရားလျှောက်လုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ အပြုအမူအချိန်-ချုံးဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းစနစ်အား အသုံးပြု. မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ စမ်းသပ်အဆိုပါတိပ်ခွေများနှင့်မှတ်တမ်းတင်ဘာသာရပ်ရဲ့အပြုအမူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ခြယ်လှယ်ဖို့မျက်စိကန်း။ တစ်တွဲနမူနာအားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်တစ်ဦးကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် preference ကို, သိသိသာသာလူစိမ်းထက်မိတ်ဖက်နှင့်အတူ side-by-side အဆက်အသွယ်ပိုမိုအချိန်ဖြုန်းဘာသာရပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရ t စမ်းသပ်မှု (27).
situ Hybrid နှင့်အနောက်တိုင်း Immunoblotting ၌တည်၏။
တိကျတဲ့ antisense riboprobes (စားပွဲတင် 1) situ mRNA တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက် D1R, D2R, TH နှင့် DAT များအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့သည် 35က S-label တပ်ထားသောစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့တစ်ဦးချင်းစီ DA အမှတ်အသားဘို့ mRNA ထိန်းချုပ်မှုခံစား (51) ။ အနောက်တိုင်းချေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့, Dar ပရိုတိန်း (NACC တစ်ရှူးလာကြတယ်၏ supernatant ထံမှထုတ်ယူနှင့်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ assayed ခဲ့သည်52).
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ဦးနှောက်ထဲမှာ DA အမှတ်အသား mRNA တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအဘို့အ cDNA စုံစမ်းစစ်ဆေး
CPP ကများနှင့်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးတွဲနမူနာကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ t စမ်းသပ်မှုများ။ အဆိုပါမိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးနှင့်လှောင်အိမ် entries တွေကိုနှင့်အတူတွဲဖက်မှု၏ပထမဦးဆုံး6ဇစဉ်အတွင်းမိတ်လိုက်အကြိမ်ကြိမ်အတွက် Group မှခြားနားချက်များ ANOVA အားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ NACC အတွက် D1R နှင့် D2R mRNA တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအဖြစ် VTA အတွက် TH, DAT, နှင့် D2R mRNA တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၏ optical ထုတဲ့ကွန်ပျူတာပုံရိပ်အစီအစဉ် (NIH IMAGE 1.64) ကို အသုံးပြု. autoradiograms ထံမှ quantified ခဲ့ကြသည်။ ဒေတာဆားထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စု၏ဆိုလို၏ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြောင်းအလဲအဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်အုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုများကသုံးသပ်ခဲ့ကြသည် t စမ်းသပ်မှုများ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အနောက်တိုင်းချေစမ်းသပ်ချက်ကနေ X-ray ရုပ်ရှင်အပေါ် D1R နှင့် D2R တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၏ optical ထုအားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည် t စမ်းသပ်မှုများ။
စမ်းသပ်မှု 1a AMPH-သွေးဆောင် CPP ကတစ်ထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေးတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များ ([ကျပန်း ip ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းခြောက်လစမ်းသပ်အုပ်စုများ (ip) AMPH ၏ကွဲပြားခြားနားသောပြင်းအား်ဆား၏ထိုးများထဲမှသို့တာဝန်ပေးအပ်နေ့က 1 အပေါ်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီယန္တရားအတွက်0pretested ခဲ့ကြသည်n = 12), 0.1 (n = 8), 0.5 (n = 9), 1.0 (n = 12), 3.0 (n = 12), သို့မဟုတ် 5.0 (/ ကီလိုဂရမ် MGn ထို့နောက် = အေးစက်၏ 13 ရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်း 3)] (နေ့က 2-4), နှင့်နေ့ရက်ကို5အပေါ်တစ်ဦး posttest အတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
စမ်းသပ်မှု 1b AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအတွက် DA receptors တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဘာသာရပ်များအတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီယန္တရားအတွက် pretested နှင့်ကျပန်းတစ် SC ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းရှစ်စမ်းသပ်အုပ်စုများဆား၏ (SC) ဆေးထိုး (များထဲမှသို့တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်n = 10) သို့မဟုတ်တစ် nonselective DA အဲဒီ receptor ရန်၏ကွဲပြားခြားနားသောပြင်းအား်ဆား [haloperidol; 0.1 (n = 8), 1.0 (n = 8), သို့မဟုတ် 5.0mg / ကီလိုဂရမ် (n = 8)], ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး D1 ကဲ့သို့သတ်သတ်မှတ်မှတ် (SCH23390; 0.5 (n = 7) သို့မဟုတ် 5.0 / ကီလိုဂရမ် Mg (n = 7)] သို့မဟုတ် D2 ကဲ့သို့သတ်သတ်မှတ်မှတ် DA အဲဒီ receptor ရန် [eticlopride; 0.5 (n = 8) သို့မဟုတ် 5.0 / ကီလိုဂရမ် Mg (n = 8)] ။ သုံးဆယ်မိနစ်အကြာစမ်းသပ်မှု 1.0a အတွက် CPP ကသွေးဆောင်ရသော AMPH (1mg / ကီလိုဂရမ်) ၏တံခါးခုံထိုး, AMPH အေးစက်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ AMPH အေးစက်၏3ရက်ပေါင်းပြီးနောက်အားလုံးဘာသာရပ်များတစ် CPP က posttest ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု2AMPH အတွေ့အကြုံကို pair တစုံဘွန်းနှင့်အတူဝငျရောကျစှကျရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များကျပန်း (ဆား၏ ip ထိုးခံသောသုံးစမ်းသပ်အုပ်စုများ၏တဦးတည်းသို့တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်n = 8) သို့မဟုတ် 1.0 ်ဆား / ကီလိုဂရမ် Mg (n = 8) သို့မဟုတ် 5.0 / ကီလိုဂရမ် Mg (n = 7) အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် CPP ကသွေးဆောင်ရသောပါရာဒိုင်း3ဆက်တိုက်-တစ်နေ့ရက်ကာလအဘို့တစ်ချိန်ကတစ်နေ့လျှင် AMPH ။ စတုတ္ထနေ့တွင်ဘာသာရပ်များ (24 ဇများအတွက်အီစထိုဂျင်-ရစေတယ်အမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲခဲ့ကြ14), ပြီးတော့တစ်ဦး 3-ဇမိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်မှုများတွင်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ pair တစုံ Bond ဆိုထိုးမခံမယူခဲ့ပါနဂိုအတိုင်းယောက်ျားတစ်စတုတ္ထစမ်းသပ်အုပ်စုသည် (အပေါ်ထိုး၏အလားအလာသက်ရောက်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်ဖို့n = 6) 24 ဇများအတွက်အီစထိုဂျင်-ရစေတယ်အမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲပြီးတော့ဖက်ဦးစားပေးဘို့ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ အားလုံးအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုမိတ်လိုက်၏အတည်ပြုဘို့ဗီဒီယို taped ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမိတ်ဖက်များနှင့်လူစိမ်းနှင့်အတူဘာသာရပ်များ side-by-side အဆက်အသွယ်၏ကြာချိန် quantified ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် 6-ဇမိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း (လှောင်အိမ်-ကူးဖွငျ့ဖျောပွထား) တွဲဖက်မှုနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှု၏ပထမဆုံး3ဇစဉ်အတွင်းမိတ်လိုက်အကြိမ်ကြိမ်၏ကြိမ်နှုန်း quantified ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ဘာသာရပ်များချက်ချင်းသေဆုံးခဲ့သည်။ အားလုံးဦးနှောက်, ရိတ်သိမ်းအခြောက်အရေခဲပေါ်အေးခဲခြင်း, DA အမှတ်အသား mRNAs ၏ situ Hybrid တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက် -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်မှု3AMPH-ချို့ယွင်း pair တစုံဘွန်း mesolimbic DA လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဆားကိုလက်ခံရရှိကြောင်းဘာသာရပ်များအနေဖြင့်ဦးနှောက် (n = 8) သို့မဟုတ် 1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် AMPH (n = စမ်းသပ်မှု 8 အတွက် 2) နွေးထွေး Superfrost / ပေါင်းဆလိုက် (Fisher ကသိပ္ပံ) ပေါ်သို့တပ်ဆင်ထားခဲ့ Coronal အပိုင်း (14 μmအထူ) သို့တစ် cryostat အပေါ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ 98-μmကြားကာလမှာဦးနှောက်အပိုင်း D1R, D2R, TH နှင့် DAT mRNAs ၏ situ Hybrid တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်။ 1.0 နှင့်အတူကြုံတွေ့ voles / ကီလိုဂရမ် AMPH တစ်ခု D1R အတွက်တိုးလာပေမယ့် NACC ထဲမှာမ D2R, mRNA တံဆိပ်ကပ်ပြသဆား-ထိုးသွင်းထိန်းချုပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်ပါက, ဘာသာရပ်များနှစ်ခုအပိုဆောင်းအုပ်စုများ (ဆား၏ထိုးလက်ခံရရှိကြောင်းထုတ်ပေးခဲ့ကြသည် MG သောကြောင့်n = 6) သို့မဟုတ် 1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် AMPH (n = 6), မိတ်လိုက်၏ 24 ဇ, ပြီးတော့မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်ခြင်း, အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့။ ဘာသာရပ်များခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ကြခြင်းနှင့်ဦးနှောက် 300 μmအထူမှာ cryostat အပေါ်ကိုခွဲခဲ့ကြသည်။ နှစ်နိုင်ငံ NACC ထံမှယူတစ်ရှူးလာကြတယ် D1R နှင့် D2R အနောက်တိုင်းချေဘို့လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်မှု4အဆိုပါ NACC အတွက် D1-type အမျိုးအစား receptors ၏ activation pair တစုံဘွန်း၏ AMPH-ချို့ယွင်းမှုအတွက်တာဝန်ရှိခဲ့ရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များနှစ်နိုင်ငံ NACC shell ကိုရည်ရွယ်လမ်းညွှန် cannulae နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။ ပြန်လည်နာလန်ထူ၏3ရက်အကြာမှာ, သူတို့ကကျပန်းသူတို့ CSF ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NACC ထိုးလက်ခံရရှိထားတဲ့အတွက်သုံးစမ်းသပ်အုပ်စုများ (200 nL / ဘေးထွက်၏တဦးတည်းသို့တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည် n = 11), သို့မဟုတ် 0.4်CSF (n = 6) သို့မဟုတ် 100 ng / ဘက် (n = 7) SCH23390 ။ သုံးဆယ်မိနစ်အကြာမှာသူတို့ 1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် AMPH ၏ ip ထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း3ရက်ဆက်တိုက်ထပ်ခါတလဲလဲခဲ့သည်။ စတုတ္ထနေ့တွင်ဘာသာရပ်များ 24 ဇများအတွက်အီစထိုဂျင်-ရစေတယ်အမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲခဲ့ကြပြီးတော့ဖက်ဦးစားပေးဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
အဆိုပါစာရေးဆရာပြင်းထန်စွာဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖတ်နေဘို့ Kyle Gobrogge, ဂလော်ဒီယာ Lieberwirth, ကယ်လီလဲ့နှင့်အမျိုးသမီး Melissa မာတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းကို ZW မှကနျြးမာရေးထောက်ပံ့ရေး MHR01-58616, DAR01-19627 နှင့် DAK02-23048 အမျိုးသား Institutes ကထောက်ခံခဲ့သည်
1 ။ ကယ်လီ AE ။ မှတ်ဉာဏ်နှင့်စွဲ: Shared အာရုံကြော circuitry နှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004; 44: 161-179 ။ [PubMed]
2 ။ Nestler EJ ။ စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား? နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1445-1449 ။ [PubMed]
3 ။ Roitman MF, Stuber GD, Phillips က PE, Wightman RM, Carelli RM ။ Dopamine အစားအစာရှာတဲ့ subsecond modulator တွေကိုအဖြစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 1265-1271 ။ [PubMed]
4 ။ Becker က JB, Rudick CN, Jenkins WJ ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 3236-3241 ။ [PubMed]
5 ။ et al ရှမ်ပိန်အက်ဖ်အေ။ နျူကလိယအတွက်အပြောင်းအလဲတွေဟာကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုနဲ့ဆက်စပ် dopamine accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 4113-4123 ။ [PubMed]
6 ။ Niesink RJ, ဗန် Ree JM ။ အထီးကျန်-သွေးဆောင်ပင်ထိုးနှင့်လူငယ်ကြွက်များ၏လူမှုရေးဖြီးလိမ်းပုံထဲမှာ opioid နှင့် dopaminergic စနစ်များပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Neuropharmacology ။ 1989; 28: 411-418 ။ [PubMed]
7 ။ Numan M က, et al ။ အဆိုပါမိခင်ပြန်လည်ရယူခြင်းတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ကြွက်များအတွက်မိခင်အပြုအမူ၏အခြားရှုထောင့်အပေါ် medial preoptic ဧရိယာ, ventral pallidum, ဒါမှမဟုတ်နျူကလိယ accumbens အတွက် D1 သို့မဟုတ် D2 dopamine အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2005; 119: 1588-1604 ။ [PubMed]
8 ။ Panksepp J ကို, Knutson B, Burgdorf ဂျေစှဲအတွက်ဦးနှောက်စိတ်ခံစားမှုစနစ်များများ၏အခန်းကဏ္ဍ: တစ်ဦးက neuro-ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်သစ် '' Self-အစီရင်ခံစာ '' တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ စွဲလမ်း။ 2002; 97: 459-469 ။ [PubMed]
9 ။ Vanderschuren LJ, Niesink RJ, ဗန် Ree JM ။ ကြွက်များတွင်လူမှုရေးကစားအပြုအမူများ၏ neurobiology ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1997; 21: 309-326 ။ [PubMed]
10 ။ Getz ll, Carter က SC, Gavish အယ်လ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ၏မိတ်လိုက်စနစ်, Microtus ochrogaster: pair တစုံ-Bond များအတွက်ဖျော်ဖြေမှုများနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းသက်သေအထောက်အထား။ ပြုမူနေ Ecole Sociobiol ။ 1981; 8: 189-194 ။
11 ။ Carter က CS, DeVries AC အ, Getz ll ။ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေစျမယား၏ဇီဝကမ္မအလွှာ: အဆိုပါမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1995; 19: 303-314 ။ [PubMed]
12 ။ လူငယ်တို့ LJ, ဝမ် Z. pair တစုံဘွန်း၏ neurobiology ။ နတ် neuroscience ။ 2004; 7: 1048-1054 ။ [PubMed]
13 ။ လျူ Y ကိုဝမ် ZX ။ နျူကလိယမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိန်းညှိဖို့ oxytocin နှင့် dopamine interactive accumbens ။ neuroscience ။ 2003; 121: 537-544 ။ [PubMed]
14 ။ et al Aragona BJ ။ နျူကလိယ dopamine differential monogamous pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု mediates accumbens ။ နတ် neuroscience ။ 2006; 9: 133-139 ။ [PubMed]
15 ။ Gingrich B, လျူ Y ကို, Cascio ကို C, ဝမ် Z ကို, Insel TR ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Dopamine D2 receptors အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးပူးတွဲမှု (Microtus ochrogaster) ပြုမူနေ neuroscience များအတွက်အရေးကြီးလှသည်။ 2000; 114: 173-183 ။ [PubMed]
16 ။ Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ ဆုလာဘ် parsing ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2003; 26: 507-513 ။ [PubMed]
17 ။ Insel TR ။ လူမှုရေးပူးတွဲမှုတစ်ခုစွဲလမ်းဖရိုဖရဲဖြစ်သနည်း Physiol ပြုမူနေ။ 2003; 79: 351-357 ။ [PubMed]
18 ။ et al Aragona BJ ။ နျူကလီးယပ်အတွင်း dopamine ဂီယာ၏ဦးစားပေးတိုးမြှင့်ကင်းများက shell ကို phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များအတွက်တိုက်ရိုက်တိုးဖို့ attribute ဖြစ်ပါတယ် accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 8821-8831 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
19 ။ Ness RM, Berridge KC ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု။ သိပ္ပံ။ 1997; 278: 63-66 ။ [PubMed]
20 ။ Grigson PS, ကြိုး RC ။ saccharin စားသုံးမှု၏ကင်း-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှု: သဘာဝအလျောက်ဆုလာဘ်၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်တန်ဖိုး၏တစ်ဦးကမော်ဒယ်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2002; 116: 321-333 ။ [PubMed]
21 ။ Knight က DK, Wallace GL, ဂျိုး GW, Logan သည် SM ။ လူနေအိမ်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကုသမှုများတွင်အမျိုးသမီးများ၏အကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်လူမှုရေးဆက်ဆံရေးတွင်ပြောင်းလဲမှု။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှု။ 2001; 13: 533-547 ။ [PubMed]
22 ။ Aragona BJ, Detwiler JM, အ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်ဝမ် Z. ဖက်တမင်းဆေးပြားဆုလာဘ်။ neuroscience လက်တ။ 2007; 418: 190-194 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23 ။ Ventura R ကို, Cabib S က, Alcaro တစ်ဦးက, Orsini ကို C, Puglisi-Allegra အက်စ် Norepinephrine အဆိုပါ prefrontal cortex အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ဆုလာဘ်များနှင့် mesoaccumbens dopamine လွှတ်ပေးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 1879-1885 ။ [PubMed]
24 ။ Curtis JT, microtine ကြွက်များတွင်ဝမ် Z. ဖက်တမင်းဆေးပြားသက်ရောက်မှု: monogamous နှင့်ကရာ vole မျိုးစိတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ neuroscience ။ 2007; 148: 857-866 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
25 ။ နျူကလိယဘို့ Aragona BJ, လျူ Y ကို, Curtis JT, Stephan FK, ဝမ် Z. တစ်ဦးကဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်-preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် dopamine accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 3483-3490 ။ [PubMed]
26 ။ et al Lim က MM ။ တစ်ခုတည်းဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကြိုးကိုင်နေဖြင့်တစ်ဦးကရာမျိုးစိတ်အတွက် Enhanced မိတ်ဖက် preference ကို။ သဘာဝ။ 2004; 429: 754-757 ။ [PubMed]
27 ။ Winslow JT မိပြီ N ကို, Carter က CS, Harbaugh CR, Insel TR ။ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက်ဗဟို vasopressin တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 1993; 365: 545-548 ။ [PubMed]
28 ။ Liao RM ။ စိတ်ကြွဆေး၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens ပြုတ်ရည်များကသွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို၏ဖွံ့ဖြိုးရေး dopamine D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor ရန်ပူးတွဲပြုတ်ရည်များက attenuated ဖြစ်ပါတယ်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008; 89: 367-373 ။ [PubMed]
29 ။ Fenu S က, Spina L ကို, Rivas အီး, Longoni R ကို, Di Chiara G. အမော်ဖင်းအကိုက်-အေးစက် Single-ရုံးတင်စစ်ဆေးရာအရပျ preference ကို: နျူကလိယ၏အခန်းက္ပဝယ်ယူပေမယ့်မပေးစကားရပ်ထဲမှာ shell ကို dopamine receptors accumbens ။ Psychopharmacology (Berl) 2006; 187: 143-153 ။ [PubMed]
30 ။ et al Stolzenberg DS ။ ယင်းနျူကလိယ၏ Dopamine D1 အဲဒီ receptor ဆွ accumbens ဒါမှမဟုတ် medial preoptic ဧရိယာကိုယ်ဝန်-ရပ်စဲကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူစတင်ခြင်းကိုအားပေးအားမြှောက်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2007; 121: 907-919 ။ [PubMed]
31 ။ Richfield ek, Penney JB, Young က AB ။ ကြွက်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် dopamine D1 နှင့် D2 receptors အကြားခန္ဓာဗေဒနှင့်ဆှဖှေဲ့ပြည်နယ်နှိုင်းယှဉ်။ neuroscience ။ 1989; 30: 767-777 ။ [PubMed]
32 ။ Carelli RM ။ နျူကလိယ '' သဘာဝက '' အားဖြည့် vs. ကင်းဘို့ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေစဉ်အတွင်းဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန် accumbens ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2002; 76: 379-387 ။ [PubMed]
33 ။ lu XY, Ghasemzadeh ကို MB, Kalivas PW ။ နျူကလီးယပ် accumbens ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ယင်းအာရုံခံအတွက် D1 အဲဒီ receptor, D2 အဲဒီ receptor, ပစ္စည်းဥစ္စာ P နှင့် enkephalin တမန် RNAs ၏ expression ။ neuroscience ။ 1998; 82: 767-780 ။ [PubMed]
34 ။ et al Bateup HS ။ psychostimulant နှင့် antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် DARPP-32 phosphorylation ၏ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့စည်းမျဉ်း။ နတ် neuroscience ။ 2008; 11: 932-939 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
35 ။ နျူကလီးယပ်အတွင်းစခန်းအချက်ပြခြင်းဖြင့် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းစည်းမျဉ်းအတိုက်အခံ Aragona BJ, ဝမ် Z. shell ကို accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 13352-13356 ။ [PubMed]
36 ။ et al Gerfen CR ။ D1 နှင့် D2 striatonigral နှင့် striatopallidal အာရုံခံ၏ dopamine အဲဒီ receptor-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဗီဇစကားရပ်။ သိပ္ပံ။ 1990; 250: 1429-1432 ။ [PubMed]
37 ။ et al Lee က KW ။ နျူကလိယ accumbens အတွက် D1 နှင့် D2 dopamine အဲဒီ receptor ပါဝင်သောအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက်ကင်း-သွေးဆောင် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2006; 103: 3399-3404 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
38 ။ Nestler EJ ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: DeltaFosB ၏အခန်းက္ပ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008; 363: 3245-3255 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
39 ။ ဘားလေး, Fiorino DF, Phillips က AG က။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ဃ-စိတ်ကြွဆေးတစ်ဦးကအရှိန်မြင့်တက်လာထိုးအချိန်ဇယားကနေဆုတ်ခွာ၏ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1999; 64: 597-604 ။ [PubMed]
40 ။ Hyman SE, Malenka RC, Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏အာရုံကြောယန္တရားများ: ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2006; 29: 565-598 ။ [PubMed]
41 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, နျူကလိယ accumbens နှင့်စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူယခင်အတွေ့အကြုံကနေထုတ်လုပ် prefrontal cortex အာရုံခံအတွက် Kolb ခ Persistent ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြုပြင်မွမ်းမံ။ J ကို neuroscience ။ 1997; 17: 8491-8497 ။ [PubMed]
42 ။ မာတင်က M, Chen က BT, Hopf အက်ဖ်ဒဗလျူ, Bower က MS, Bonci အေကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးရွေးချယ်သည့်နျူကလိယ accumbens ၏အဓိကအတွက်, LTD abolishes ။ နတ် neuroscience ။ 2006; 9: 868-869 ။ [PubMed]
43 ။ Kolb B, Gorny, G လီ Y ကို, Samaha AN, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ ဖက်တမင်းဆေးပြားသို့မဟုတ်ကင်းသည့် neocortex နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်အခြေခံအဆောက်အဦး plasticity မြှင့်တင်ရန်အကြာတွင်အတွေ့အကြုံကိုများ၏စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2003; 100: 10523-10528 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
44 ။ Berke JD ။ compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် relapse တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သင်ယူနှင့်မှတ်ဉာဏ်ယန္တရားများ။ နည်းလမ်းများ Mol Med ။ 2003; 79: 75-101 ။ [PubMed]
45 ။ Johns JM, လမ်းပြ Noonan LR, Zimmerman LI လီ L ကို, Pedersen CA. Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူများနှင့်ရန်လိုစတင်ခြင်းအပေါ်နာတာရှည်နှင့်စူးရှကင်းကုသမှုဆိုးကျိုးများ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1994; 108: 107-112 ။ [PubMed]
46 ။ Johns JM, လမ်းပြ Noonan LR, Zimmerman LI လီ L ကို, Pedersen CA. ရေတိုနှင့် Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူများနှင့်ကျူးကျော်အပေါ်ကိုယ်ဝန်ကိုကင်းကုသမှုအနေဖြင့်ရေရှည်ဆုတ်ခွာ၏ဆိုးကျိုးများ။ Dev မှ neuroscience ။ 1997; 19: 368-374 ။ [PubMed]
47 ။ Slamberova R ကို, Charousova P ကို, ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်း Pometlova အမ်သမ်ဖက်တမင်းအုပ်ချုပ်ရေးမိခင်အပြုအမူချို့ယွင်း။ dev Psychobiol ။ 2005; 46: 57-65 ။ [PubMed]
48 ။ Beatty WW, Costello KB, Berry ဟာ SL ။ စိတ်ကြွဆေးများကကစားတိုက်ပွဲများ၏ဖိနှိပ်မှု: catecholamines ရန်, agonists နှင့်ပေါင်းစပ် inhibitors သက်ရောက်မှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1984; 20: 747-755 ။ [PubMed]
49 ။ Sutton ME, Raskin LA က။ Post-နို့ဖြတ်တဲ့ကြွက်များတွင်ကစားနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏သက်ရောက်မှု၏အမူအကျင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1986; 24: 455-461 ။ [PubMed]
50 ။ et al Vanderschuren LJ ။ Methylphenidate ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်လူမှုရေးကစားအပြုအမူ disrupts ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 2946-2956 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
51 ။ Dietz DM, Tapocik J ကို, Gaval-Cruz က M, Kabbaj အမ် Dopamine ပို့ဆောင်ရေး, မဟုတ် hydroxylase tyrosine, စိတ်ကြွဆေးမှအမူအကျင့်ာင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအဆုံးအဖြတ်အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပေမည်။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005; 86: 347-355 ။ [PubMed]
52 ။ et al Krishnan V ကို။ ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသများတွင်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်ခြင်းနှင့်ခုခံရေးအခြေခံမော်လီကျူးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်။ cell ။ 2007; 131: 391-404 ။ [PubMed]